ရွှေတံခါး: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် တပ်မတော်သားတစ်ဦး၏ ရိုးရှင်းပွင့်လင်းသောအမြင် အပိုင်း(၁)
Posted by ရွှေတံခါး at 3:23 AM
ZORRO June 1, 2012 at 11:38 PM
ဒေါ်စုကိုကျွန်တော်အမုန်းဆုံးအချက်ဟာ ကိုရွှေနဂါးထောက်ပြတဲ့ ဒေါ်စုရဲ့အမျိုး တွေကိစ္စပါ..ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းက အင်္ဂလန်သံရုံးမှာ တာဝန်ကျတယ်။အဲဒီတုန်းက ဒေါ်စု အကျဉ်းကျနေတယ်၊ မိုက်ကယ်ကြီးဆုံးတော့မယ့်အချိန်ဗျ..အဲဒါသူ့ယောင်္ကျားဆုံးခါနီးလို့ ဒေါ်စုကို မရ ရအောင်သွားခေါ်မယ်တဲ့။သူ့ရဲ့ ခဲအိုလို့ပြောတယ်ထင်တာဘဲ။ ဗီဇာလာလျှောက်တာတဲ့။ ထုံးစံအတိုင်း အထက်တင်ပေါ့။သူကချက်ခြင်းလိုချင် တယ်တဲ့။စောင့်မယ်တဲ့။မဖြစ်နုိုင်ပါ မနက်မှာအဖြေတစ်ခုသိရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောတာမရဘူး သံအမတ်ဝင်တွေ့မယ်ဆိုပြီးအတင်းတက်၊အတင်းဝင်တဲ့ဗျ.. သံအမတ်ကိုလည်းံ မင်းကိုခန့်ထားတာ နှစ်နုိုင်ငံဆက်ဆံရေးကောင်းမွန် တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့။အခုဗီဇာလေးတစ်ခုတောင် အဆင်ပြေအောင် မလုပ်ပေးနိုင်တာ။ခင်ဗျားမရှိသင့်ဘူး။အင်္ဂလန်မြေဟာ လူဖျင်းမြန်မာတွေ အတွက် မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးရိုင်းပြစွာပြုမူ ဆက်ဆံသွား တယ်တဲ့ ဗျာ။ဒေါ်စု ငယ်ငယ်ကမြန်မာ့သမိုင်း မလေ့လာခဲ့ဘူးဗျ..ဘယ်သူငြင်းရဲလဲအဲဒါကို။ ကျွန်တော်သက်သေပြမယ်။ ဘာမှမဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တောင် မြန်မာ့သမိုင်း ကိုသေချာသင်တော့တဲ့ အထက်တန်းလည်းရောက်ရောကျွန်တော့မှာ ဆိုဒ်ကို တစ်ခုရသွားတယ်။ ဘ၇စ်တစ်ခ်ျဆိုတဲ့ကောင်တွေကိုတစ်သက် မကြေဘူး။ ငါတို့သာတဲ့နေ့ ဂလဲ့စားပြန်ချေမယ်၊ မချေနိုင်သေးတောင် ဒီကောင်တွေနဲ့အောက်ကျခံ မပေါင်းဘူး။ စီးပွားရေးလဲမလုပ်ဘူး။ Sir ဆိုတဲ့စကားကိုမြေမြုတ်ထားတယ် ဘယ်တော့မှဒီကောင်တွေကိုမခေါ်ဘူး။ အဲဒီဆိုဒ်ကိုနဲ့ဘဲ ခုချိန်ထိကျွန်တော် ဘရစ်တစ်ခ်ျဆိုတာသိရင်၊ ချက်ချင်းမိတ်မဖွဲ့ဘူး။အပေါင်းသင်းထဲမှာလဲ ဘရစ်တစ်ခ်ျမရှိဘူးခုထိဘဲ ။ပြီးတော့တက္ကသိုလ်တုန်းက ကျွန်တော် အိုင်ယာလန်ကကောင်တွေကို ဘယ်အရွယ်ဖြစ်ဖြစ် လုိုက်ပြီးမိတ်ဖွဲ့တယ်။ကျောင်းရုံးခန်းထဲက စာရေးမကို မြန်မာပြည်ကပေါချောင်ကောင်းလေးတွေမှာ၊လက်ဆောင်ပေး၊ ခင်အောင်ပေါင်ပြီး။ အိုင်ယာလန်စရင်းရအောင်ယူ၊လိုက်ရှာမိတ်ဖွဲ့ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်လိုဘာမှမဆိုင်။ဗိုလ်ချုပ်ကိုသတ်သွား၊တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးသွားတဲ့ ကောင်တွေကိုအဲဒီလောက်မုန်းတာ ဒေါ်စုရယ်..ခင်ဗျားအစားကျုပ်အသည်း နာလွန်းလို့ပါဗျာ။ လောကကြီးမှာ တိုင်းပြည်မချစ်တဲ့လူ၊လူမျိုးမချစ် တဲ့လူ တွေအများကြီး၊ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားလို ကိုယ့်အဖေ/ကိုယ့်အမျီုး မချစ်တဲ့လူကတော့တော်တော်ရှားသား။ပြီးတော့ကိုယ့်ကျေးဇူးရှင်ကိုသတ်တဲ့ အမျိုးကိုမှယူရတယ်။တကယ်တွေးမယ်ဆုို ဒီလိုတောင်တွေးချင် ရင်တွေးလို့ရတယ်...ခင်ဗျားတို့က ဗကပမျိုးတွေဆိုတော့ ဒီစိတ်လဲခင်ဗျားမှာရှိလို့(ဗကပဆိုတာက အမြင်မတူရင် ကိုယ့်အဖေကိုယ်တောင်ပြန်သတ်တယ်လေ၊)ဒီကောင့်ကုိုယူတာအဆန်းမ ဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ.... ခင်ဗျားတော်တယ်၊တတ်တယ်။(ဗမာလူမျိုးလေ)၊ဗဟုသုတကြွယ်ဝတယ်၊ (အကျဉ်းချထားတုန်းက၊ဘာမှမလုပ်ရတော့စာအုပ်တွေဖတ်တယ်လေ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရဲ့ကျေးဇူးပေါ့၊သေတောင်ခင်ဗျားအဲ့ကျေးဇူးမမေ့နဲ့နော်။ နိုဘယ်ဆုတောင်သူကြောင့် ရတာ၊အဲဒါခင်ဗျားမငြင်းနဲ့ အပြင်မှာနေရင်၊အမှားတွေပြော/လုပ်တာနဲ့တင် နိုဘယ်မပြောနဲ့ အိုပယ်ဆို ဆိုပြီး၊ခင်ဗျား မြောင်းထဲရောက်တာကြာပေါ့)ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့မျိုးဆက်/အာဇာ နည်မျိုးဆက် လဒသွေးရောသွားပြီး ဘယ်တော့မှာပြန်မရတော့ဘူး။ အဲဒီအတွက် ၊ဒေါ်စုရေ ခင်ဗျားကို ကလဲ့စားချေမဲ့လူ၊အမျိုးဖျက်မ ဆိုပြီး၊ ရင်နာတဲ့လူတစ်ယောက်က ခင်ဗျားကို ဒီမြေမှာ အရှင်တောင်ထားပါ့မလား ဆိုတာတော့ကျုပ်ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်လုပ်လိုက်အုံးမယ်ဗျာ...ပြီးရင် လက်ခုတ်ကို အားရပါးရကြီးကိုတီးရအုံ့းမယ့်နေ့ ရောက်လာမှာပါဗျာ။၊ ခင်ဗျားအတွက်ကျွန်တော် အမြဲဆုတောင်းပေးနေပါမယ်။ မိဘကျေးဇူး ဆပ်ဖို့ကို တစ်ခါမှမပြောဖူးတဲ့ဒေါ်စု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မေတ္တာတွေ၊ မိဘကျေးဇူးဆပ်ဖို့မပြောနဲ့ အာဇာနည်ဗိုလ်ချုပ်နဲ့မိခင်ရဲ့ သမိုင်းကိုအမဲစက် ထင်အောင် လုပ်ခဲ့တာတွေ တစ်နေ့တူသောအကျိုးပေးမယ်။၀ဋ်လည်မှာပါ။
ငရဲက သေမှခံရတာနော်ဘ၀ကူးတယ်။ ၀ဋ်ဆိုတာဘ၀မကူးဘူး။ ခုခံရလိမ့်မယ်။
Above comment is very good. Aung San Su Kyi should not marry Myanmar enemy race ( British ) because British colonize Myanmar and killed her father.
LaMinnMaung August 2, 2012 at 2:08 AM
မြန်မာ့တပ်မတော်ကို....တည်ထောင်ပြီး...ပြည်သူ့တွေချစ်အောင်...ဖန်တီးခဲ့သူကတော့...ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပါ၊ ဖခင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့..တပ်မတော်ကို..ပြည်သူတွေမုန်းအောင်...ဖန်တီးခဲ့တာကတော့..ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့..သမီးပါ။ အဖေက..လက်နဲ့ရေးခဲ့တာကို..သမီးလုပ်သူက..ခြေနဲ့ဖျက်တာကတော့....လွန်လွန်းပါတယ်။ ရှက်တတ်ရင် လဲသေဖို့..ကောင်းတယ်ဗျာ။
victornaing January 11, 2013 at 11:43 PM
သူများ တိုင်းပြည် တွေမှာ သမ တ တစ်ယောက်ရဲ့အရည် အချင်းက ဘယ် လို လဲ သိရင် တင်ပေး ကြပါအုံး
လူ တစ်ယောက် သမတ ဖြစ် ရန် နိုင်ငံတစ်ခု ရဲ ဖွဲ့ စည်းပုံ ကို ပြင်သင့်လား။
gwado January 26, 2013 at 7:14 AM
ကိုယ်လိုရာ ကိုယ်ဆွဲပြောနေတဲ့ သောက်ရူးတွေ.